उप-मेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा सरस्वती र सगरमाथा बिजयी – Vision Khabar
उप-मेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा सरस्वती र सगरमाथा बिजयी
। २८ जेष्ठ २०७५, सोमबार २१:४६ मा प्रकाशित
बाँके । कोहलपुरमा जारि प्रथम मा.वि स्तरीय उपमेयर छात्रा क्रिकेट रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको सरस्वती मा.वि. र वागेश्वरी एकेडेमीबीचको पहिलो खेलमा सरस्वती मा.वि. बिजयी भएको छ ।
यस्तै सोमबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा सगरमाथा ज्ञानपुञ्ज मा.वि. ३० रन अन्तरले बिजयी भएको छ । टस हारेर मैदानमा उत्रिएको सगरमाथाले निर्धारित १५ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १०० रनको योगफल तयार पार्न सफल भएको थियो । सगरमाथाका लागि सुजाता बोगटीले सर्वाधिक ३१ रन र स्वस्तिका भट्टले १६ रनको योगदान दिए । यस्तै सगरमाथाका अलिसा सुनारले २ र यमुना थापा, सुजाता बोहरा, पुजा चन्द र अनिशा शाहीले समान १/१ विकेट लिन सफल भए ।
१ सय १ रनको बिजयी लक्ष्य लिएको लक्ष्मी माविले १५ ओभरमा ९ विकेटको क्षतीमा मात्र ७० रन जोड्न सक्यो । लक्ष्मी माविका तर्फबाट पुष्पा बल मे मात्र १८ रनको सर्वाधिक योगफल जोड्न सफल भइन् । लक्ष्मी माविका तर्फबाट टिका थापाले २ र पुजा थापाले १ विकेट लिन सफल भए । खेलको प्लेयर अफ द म्याच सगरमाथाकी सुजाता बोगटी घोषित भइन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार ग्रिन पिस मावि र कृष्ण मावि बिच पहिलो खेल हुने भएको छ भने दोस्रो पारीमा जनज्योतीले तक्षशिला एकेडेमीको सामना गर्ने भएको छ ।